FontForge yemhando yakawanda font mupepeti | Linux Vakapindwa muropa
Kugadzira typeface haina kuoma sezvaungafunga, saka zvirinani kuti unoda nzwisiso yakakosha yeMushambadzi. Mafonti akagadzirwa kuburikidza neiterative maitiro, uko iwe paunogadzira shanduko kune mavara mavara mune font fonti, wozoadzokorora iwo mukushandisa uye woita zvimwe dhizaini dhizaini.
Asi Iwe unofanirwa kuziva kuti kune zvimwe zvikumbiro zvichatibatsira nebasa rekugadzira typographic font, ndosaka nhasi tichazotaura nezveFontForge.
1 Nezve FontForge
2 Maitiro ekuisa FontForge font mupepeti paLinux?
FontForge irondedzero uye bitmap font mupepeti iyo inobvumidza iwe kugadzira, kugadzirisa, kana kushandura akasiyana mafonti, kusanganisira:
TrueType (TTF), TrueType Unganidzo (TTC), OpenType (OTF), PostScript Type 1, TeX Bitmap Fonts, X11 OTB bitmap (sfnt chete), Glyph Bitmap Distribution Fomati (BDF), FON (Windows), FNT (Windows), uye Webhu Open Source Fomati (WOFF).
Iyi yemahara software application (GPL rezinesi) yakanyorerwa kushanda pane akasiyana masisitimu anoshanda anosanganisira Windows, Mac OS uye Linux.
Fontforge zvakare inopinza uye kunze kwenyika mafonti kuenda uye kubva ku scalable vector mafomati mafomati (SVG) uye iyo Yakabatana Fonti Chinhu Chinhu Fomati (UFO).
Uyewo inotsigira zvisina kufanira Microsoft math math compensions (MATHtabla) yakaunzwa yeCambria Math uye yakatsigirwa neHofisi 2007, XeTeX uye LuaTeX.
Inenge imwe yemahara OpenType math font yakagadzirwa muFontForge.
Kugonesa otomatiki fomati kutendeuka uye mamwe mabasa anodzokororwa, FontForge inoshandisa mitauro miviri yekunyora: mutauro wayo uye Python.
FontForge inogona kumhanyisa zvinyorwa kubva kune yayo GUI, kubva kumutsara wekuraira, uye zvakare inopa maitiro ayo sePython module kuitira kuti igone kubatanidzwa mune chero chirongwa chePython.
Uyewo inotsigira kutaurwa kweAdobe OpenType ficha refaira (ine yayo yekuwedzera kune iyo syntax).
FontForge inogona kushandisa Potrace kana AutoTrace kutsvaga otomatiki mifananidzo ye bitmap uye kuunza iwo mufonti. Zvikamu zveFontForge zvekodhi zvinoshandiswa neLuaTeX yekumisikidza injini yekuverenga uye kuongorora mafonti eOverType.
Iyo FontForge sosi kodhi inosanganisira dzinoverengeka zvekushandisa, kusanganisira 'showttf' iyo inoratidza zvirimo mukati mabhainari font mafaira uye iyo WOFF inoshandura uye deconverter.
Maitiro ekuisa FontForge font mupepeti paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa chishandiso ichi, vanogona kutevedzera rairo dzatinogovana pazasi.
Pakati pese, kune chero chero kugoverwa kweLinux, tinogona kuisa chishandiso pane yedu system nerubatsiro rweFlatpak mapakeji., saka isu tinongofanirwa kuve nerutsigiro rwakawedzerwa kuhurongwa.
Kana iwe usina rutsigiro urwu, unogona kubvunza chinotevera chinongedzo kwatinotsanangudza maitiro ekuzviita.
Iye zvino kuisa chishandiso ichi isu tiri kungoita yekuraira mune terminal:
Ubuntu 16.04 LTS uye Ubuntu 14.04 LTS vashandisi vanogona kushandisa inotevera dura, iro ravachawedzera kune yavo system nekunyora iwo unotevera kuraira:
Mushure meizvozvo isu tichagadzirisa runyorwa rwedu rwepakeji uye zvinyorwa pamwe ne:
Pakupedzisira tichaisa iyi application nekuita zvinotevera:
Kune vashandisi veDebian uye gare gare vhezheni dzeUbuntu isu ticha dhawunirodha anotevera mapakeji. Tichatanga kugadzira dhairekitori isu patinozo chengeta navo
Isu tinoiwana iyo:
Uye isu tichaenda kurodha pasi zvinoenderana nemavakirwo edu. 64-bit system vashandisi:
Ivo avo vanoshandisa 32-bit masisitimu anotora zvinotevera:
Pakupera kwekuburitswa, isu tichaisa aya mapakeji pane ino system nekuita iwo wekuraira:
Uye kana paine matambudziko nezvinotsamira, tinozvigadzirisa ne:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » FontForge yemhando yakawanda font mupepeti
MuArch uye zvigadzirwa zvinongova chete sudo pacman -S fontforge: V